रोचक – Hot Post News
एजेन्सी– छिमेकी मुलुक भारतका १३ वर्षका ललित पाटिदार अनौठो रोगबाट पीडित बनेका छन् । १३ वर्षको कलिलो उमेरमै उनको अनुहारभरी कपाल पलाएको छ । वेरउल्फ सिन्ड्रोम रोगका कारण उनको अनुहारभरी कपाल पलाएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । ती बालकको झण्डै ५ सेन्टिमिटर सम्म लामा भुत्ला छन् । मध्य प्रदेशका उनको टाउकोमा जस्तै लामो तथा बाक्लो कपाल अनुहारमा बोकेर निकै कष्टप्रद जीवन विताइरहेका छन् । कतिपय मानिसले आफूलाई देखेर बाँदर समेत भन्ने गरेको र कतिपयले त ढुंगाले हिर्काउने गरेको उनी बताउँछन् । भारतीय प्रहरीमा भर्ना भएर देशको सेवा गर्ने उनको इच्छा छ । ललितकी आमा पर्वतबाइका अनुसार परिवारमा १४ जना सदस्य छन् । जन्मैदेखि ललितको अनुहारभर असामान्य रौँ हरु थिए । उनको त्यो समस्यालाई चिकित्सा भाषामा कन्जेनिटल हायरट्राइकोसिस भनिन्छ । सुरुवाती दिनमा उनीसँग साथीहरु नजिक आउने डराउने गरेको भएपनि अहिले चाहीँ सब
एजेन्सी– चीनको एक मिडिया रिपोर्टमा आएको समाचारले अहिले विश्वलाई छक्क पारिदिएको छ । चिनियाँ शोधकर्ताहरुले पहिलो पटक प्रयोगशालामा सुँगुर र बाँदरको हाइब्रिडलाई जन्म दिएका हुन् । द मिररमा आएको रिपोर्टका अनुसार सुँगुरका दुई बच्चामा बाँदरको मुटु, शरीर र छाला छ । यी सुँगुरका बच्चा प्रयोगशालामा जन्माइएका थिए । तर, उनीहरु लामो समय बाचेनन्, एक सातामा नै म रे । वैज्ञानिकका अनुसार उनीहरुको मृ त्यु आइभीएफ प्रक्रियामा कुनै प्रकारको समस्याका कारण भएको हुनसक्छ । द न्यु साइन्टिस्ट पत्रिकामा छापिएको रिपोर्टअनुसार यो विश्वमा पहिलो पटक गरिएको प्रयोग हो । स्मरण रहोस्, यो प्रयोग स्पेनिश वैज्ञानिक युआन कार्लोस इजिपिसुआ बेलमोन्टेले दुई वर्ष अघि गरेको प्रयासलाई अनुसरण गर्दै गरिएको हो । द न्यू साइन्टिस्ट पत्रिकाको रिपोर्टमा बताइए अनुसार तांग हाइ र उनको समूहले जुआन कार्लोसको सोचलाई अघि बढाएका हुन् र आनुवंशिक र
विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री सन्ना मारिन, जसलाई आमा एक्लैले पालेकी थिइन्
फिनल्याण्डको सोसल डेमोक्र्याटिक पार्टीकी नेतृ सन्ना मरिन विश्वकै सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री बन्नुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका अन्ति रिन्नेको पार्टीले मन्त्री समेत रहेकी मरिनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो । उहाँ आफ्नो पार्टीकी उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो पार्टी अध्यक्षले विरामी विदा लिँदा गत बर्ष पार्टी चलाउनुभएको थियो । गठबन्धन सरकारका रहेका पाँच पार्टीमध्ये फिनल्याण्ड सोसियल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एसडीपी)ले प्रधानमन्त्री रिन्नेले पदबाट राजीनामा दिएपछि ३४ बर्षीया मरिनलाई सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउनेगरी चयन गरेको छ । कान्छा प्रधानमन्त्रीमध्ये युक्रेनका प्रधानमन्त्री ओलेक्सी होन्चरुक ३५ वर्षका हुनुहुन्छ भने न्यूजील्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नको ३९ वर्षको हुनुहन्छ । सोसल डेमोक्र्याटिक संसदीय सम
आधा बोरा फलको २९ लाख रुपैया, एउटै रूखको एक करोड मोलमोलाई
बोधिचित्त एक जिजिपस जातीमा पर्ने नया प्रजाति जिजिपस वुद्धेन्सिस् हो । यसलाई स्थानीय भाषामा वुद्धचित्त वा वोधिचित्त पनि भनिन्छ । यसको फल माला बनाउन तथा सजावटको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ भने विरुवा गाई बस्तुको दानाको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस विरुवाबाट प्राप्त हुने फल वा दानाको माला मुख्यतया वुद्ध धर्मावलम्बि हरुले प्रयोग गर्छन् ।वौद्धिक गुरु दलाई लामाले आफ्नो प्राथनाको समयमा यसैको माला प्रयोग गर्नुहुन्छ ।प्राय बौद्ध धर्ममा धेरै महत्वको वस्तु भएकै कारणले एसलाई नेपाली समाज तथा स्थानीय भाषामा बौद्धचित्त भनेर चिनिन्छ ।महत्वको कुरा गर्दा फल जति सानो दानामा भयो त्यतिनै महत्व मानिन्छ ।अर्को भाषामा भन्दा साना दाना धेरै मुल्यमा विक्री हुन्छन् ।नेपालको काभ्रेमा फलेको १ पाथि दाना वा ३.६ देखि ३.९ के.जी दानाको मुल्य रु.२५ लाख पर्छ । buddha chitta plant बोदिचित्तको दानालाई सुख्खा पारिन्छ र मा
हिन्दू शास्त्रअनुसार महिलाहरुलाई लक्ष्मीको दर्जा दिइन्छ । महिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने मान्यता राखिन्छ । कुनै घरमा महिलाहरुलाई अपमान गर्ने वा नराम्रो व्यबहार गरिएमा त्यो घरमा शान्ति छाउँदै । ज्योतिष शास्त्र अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो छ भने त्यसले ती महिलाका धेरै गुणहरुबा बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । महिलाका कुन–कुन अंग ठूलो भएमा ती महिलाहरु भाग्यमानी हुन्छन– घाँटी– शास्त्रका अनुसार लामो घाँटी भएकामहिलाहरु मेहेनती र आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने गर्छन। यी महिलाहरुलाई समाजमा निकै मान–प्रतिष्ठा समेत पाउने अवसर मिल्नेछ। कान– शरीरका दुई वटै कान ठूलो भएका महिलाहरु लामो आयु लामो र निकै भाग्यमानी हुने गर्छन। कपाल– ज्योतिष शास्त्रका अनुसार लामो कपाल भएका महिलाहरुले जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्ने र परिवारलाई सुखी र खुशी राख्न सक्छन्। हात– शरीरको दुईवटै
Dec92019 by onlinenewsNo Comments
फिनल्याण्डकी ३४ वर्षीया सान्ना मरिन विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्री…
फिनल्याण्डकी ३४ वर्षीया सान्ना मरिन विश्वकै कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छिन् । उनी देशको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा युवा प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । मरिनले यही हप्ता नै पदभार ग्रहण गर्ने बताइएको छ । मरिनको नेतृत्वमा बन्न लागेको गठबन्धन सरकारमा ५ दल सहभागी हुनेछन्, सबै दलको नेतृत्व महिलाहरुले गर्नेछन् । फिनल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री आन्ती रिन्नेले राजीनामा दिएपछि सना मरिनलाई प्रधानमन्त्री बन्न जोड दिइएको थियो । यसअघि उनी पहिवहन र सञ्चार मन्त्री पनि रहेकी थिइन् । ३४ वर्षीया मरिन विश्वकै युवा प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् । उनले युक्रेनका प्रधानमन्त्री ओलेक्सी होन्चेरुकलाई पनि पछाडि पारेकी छिन् । होन्चेरुक ३५ वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै मरिनले न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनलाई पनि पछाडि पारेकी छिन् । जसिन्दा ३९ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएकी थिइन् । क
अब पुरुषका लागि पनि बन्यो गर्भनिरोधक सुई, एक पटक लगाए १५ वर्ष बच्चा नहुने
अहिलेसम्म गर्भनिरोधक चक्की र सुई महिलाका लागि मात्र बनेका थिए। महिलाहरुले एक पटक सुई लगाए तीन महिनासम्म गर्भ नबस्ने सुई प्रचलित छ।तर, अहिले भारतीय वैज्ञानिकहरुले पुरुषका लागि पनि सुई बनाएका छन्। त्यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म बच्चा नहुने बताइएको छ । भारतीय वैज्ञानिकहरुको पहिलोपटक यस्तो सुई बनाएको दाबी गरेका छन् । यो सुई इण्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चका वैज्ञानिकहरुले तयार पारेका हुन्। सुई आविष्कारमा संलग्न वैज्ञानिक डा. आर एस शर्माका अनुसार यो सुई एक पटक लगाएको खण्डमा १५ वर्षसम्म काम गर्नेछ। उक्त सुईको प्रयोग भारतको पाँचवटा राज्यमा भइसकेको छ।दिल्ली, हिमाञ्चल, जम्मू, पञ्जाब र राजस्थानमा यसको परीक्षण गरिएको हो । ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इण्डियाले सुई पास गरेपछि सर्वसाधारणले पनि लगाउन पाउनेछ । अहिलेसम्म गर्भनिरोधक चक्की र सुई महिलाका लागि मात्र बनेका थिए। महिलाहरुले एक पटक स
मानव सभ्यताको शिशु बिहानीमा आदिम मानवको आद्यःचेतनाले प्रकृतिको विनासकारी र कल्याणकारी रुपलाई अदृष्य शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको ठान्यो । अदृष्य शक्तिप्रतिको डर अनि त्रासको साथसाथै आस्था र समर्पणको आधारमा प्रकृतिलाई दैवीकरण गर्यो । प्रकृतिका विविधरुपलाई फरक फरक शक्तिद्धारा सञ्चालित भएको विश्वासमा वहुदेववादको कल्पना गरियो । अतः विश्वको हरेक सभ्यतामा विकसित धर्म र संस्कृतिले प्रकृतिपूजालाई अपनाएको पाईन्छ । आदिम सभ्यताको उत्खननबाट प्राप्त पुरातात्विक सामाग्रीहरुको आधारमा प्राचीन मानव प्रकृतिपूजक रहेको पुष्टि हुन्छ । फरक यति हो कि देश,काल, वातावरण र पर्यावरण अनुसार पूजा, उपासना र साधना पद्धति फरकफरक हुन्छ । हिन्दू धर्म र दर्शनमा प्रकृति लगायत समस्त विश्वकल्याणको लागि उपासना र प्रार्थाना गरिन्छ । यस्ता उपासना र अनुस्ठानको भित्रि उद्धेश्य वातावरणीय र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्ने रहेको देखिन
फेवातालको पानीमुनिको जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको पाइयो
काठमाडौं, मंसिर २२-सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सारिएको अर्को भद्दा उदाहरण हो पोखराको फेवाताल अतिक्रमण।वि।सं। ०१४ को सर्भेअनुसार २२ हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवातालमा अहिले नौ हजार नौ सय ५५ रोपनी जग्गा मात्रै छ। नौ हजार नौ सय ३५ रोपनी जग्गा अभिलेखबाटै गायव भएको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण पोखरेल र गोविन्द सुवेदीले लेखेका छन्। भारतको सहयोगमा ०१७ सालमा निर्मित पार्दी बाँध ०३१ मा फुट्यो र फेवाको आधाभन्दा धेरै पानी बगेर गयो । कतिसम्म भने बाराही मन्दिर पनि हिँडेरै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । बाराही जाने बाटोमा कतिपय मान्छेले गाडी पार्किङ गर्थे भने बालबालिका कबड्डी खेल्थे । त्यही मौकामा पहुँचवालाले जग्गा कब्जा गर्न थाले । ०३३र३४ मा नापी हुँदा उनीहरूले जग्गा दर्ता पनि गराए । यसरी फेवाको १६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर ६७३ कित्तामा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बन्यो ।
जीवन सुखमय बनाउन चाहनुहुन्छ ? हो भने मोटी युवतीसँग विवाह गर्नुहोस्
अध्ययन अनुसार मोटी युवती रोज्ने पुरुषहरुको जीवनमा खुसी छाउने देखिएको छ । नेशनल अटोनामस युनिभर्सिटी अफ मेक्सिकोमा भएको सोध अनुसार, मोटी महिला तथा युवतीहरुको जीवनसाथी दुब्ली तथा पातली महिलाहरुको जीवनसाथीको तुलनामा १० गुना बढी खुसी रहन्छन् । अध्ययनमा भनिएअनुसार, मोटी युवतीहरु आफ्नो जीवनसाथीलाई जिममा जान तथा सँधै फिट रहन भन्दै किचकिच गर्दैनन् । अनि उनीहरु आफू पनि तौल कम गर्ने भनेर कोसिस गर्दैनन् । दुवै जना सँग सँगै खानेकुरा खान मन पराउँछन् । तर, पुरुषहरुको रोजाइमा भने अग्लो तर पातलो युवती नै पर्ने गर्छन् । केही समय अधि मात्र गरिएको सोधअनुसार, मोटी महिलाहरुसँग बिबाह गरेका वा पे्रम सम्बन्धमा रहेका पूरुष धेरै खुसी रहन्छन् । अध्ययन अनुसार, मोटी महिलाहरुसँग प्रेममा परेका पूरुष धेरै मुस्कुराउँछन् र जीवनको लागि उनको व्यवहार धेरै सकारात्मक रहन्छ । उनीहरु धेरै खुसी हुन्छन् । यति मात्र होइन, से